Cherry senzelwe ukuwafaka, kufanele kube ne peduncles. Lokhu kuvimbela isithelo ziwohloke masinyane futhi ukuvuza juice. Ukuze cherry ujamu ayikashintshi umbala ngesikhatsi isitoreji, kutuswa ukuba ukuvala nesembozo lacquered kuphela.
cherry pitted Kulonda abiliswe 2 amahora. Isithelo wageza isuswe bone, bese uthele 60% ushukela isiraphu. Ushukela othathwe kg ukubala 1,05
amakhilogramu cherry ngalinye. Ushukela ezisele sengezwe at ukupheka ngamunye.
Cherry jam ngo ukwenziwa izinyathelo ezimbili ngale ndlela. Izithelo, egcwele isiraphu,
labetibambile amahora okungenani izindinyana ezinhlanu, bese okuqukethwe elicwengekileyo ngokusebenzisa ngesihlungo noma strainer. Ushukela asele yengezwe isiraphu balipheka imizuzu okungenani 20. I izithelo isiraphu cherry futhi kwehlisa futhi igcinwe amahora mayelana 5. Ukusebenza iyaphindwa, bese cherry ujamu upheke kuze ithenda. Abilayo isiraphu lokushisa kufanele okungenani 105 degrees.
I jamu esiphelile ngefomu ngokugcwele is batheleka amabhange ezishisayo nezomile kuthiwa hermetically uphawu lacquered tin zamabhodlela. Amabhange kumele uvule entanyeni kwehle futhi luphole.
Cherry jam kungekho imbewu kungenziwa abilisiwe 1 reception. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uthele abilayo cherry isiraphu, okuyinto ibhalwe ngesilinganiso 1 kg cherry enkomishini yamanzi kanye 1.5 kg ushukela. Izithelo isiraphu ulayishe ukusinda okungenani amahora angu-3, bese upheke kuze kwenziwe. Jam apakwe inzalo
amabhange, kanye hermetically evalwe inverting selehlile.
Cherry jam imbewu
Ukuze isiraphu ngokushesha bakwazi ukungena cherry ne imigodi, kufanele problanshirovat emanzini abilayo imizuzu mayelana 1.5. Ngalesosikhathi thela izithelo 40% ushukela isiraphu futhi bagcizelele ekamelweni lokushisa amahora angaba ngu-7. Lokhu ujamu ibhalwe izigaba ezintathu. Ushukela othathwe ngesilinganiso 1 kg
amakhilogramu izithelo. Ushukela ezisele ihlukaniswe yaba izingxenye 3 futhi wanezela
ukupheka ngamunye. Ngemuva zokuqala bayashintshana ekufukameleni cherry eyama on ngesihlungo noma strainer. I isiraphu sengezwe ingxenye eyodwa kwezintathu ushukela ezisele futhi ubilise imizuzu engu-15. Ngemva kwalokho cherry elicwiliswe isiraphu aphethwe i eyengeziwe amahora 7. Ukusebenza okuphindaphindiwe kabili ngaphezulu. ujamu Ready ezenziwe zahlanganiswa ngo amabhange oyinyumba, eneziqongo futhi selehlile kancane.
Cherry jam nge raspberry
Ukuze wenze lokhu, cherry ujamu zingafundwa noma ngaphandle kwamathambo. Per amakhilogramu cherry kuthatha cishe 200 grams. raspberry futhi 1 kg ushukela. Pheka lo ujamu ngendlela efanayo njengoba lo cherry.
Cherry jam nge gooseberries
Cherry cishe akanazakhiwo gelling, ngakho ukuze uthole ukungaguquguquki obukhulu, ukuminyana cherry engeza berry ehlukahlukene izithelo ekupheleni ukupheka. We walungisa cherry kuyadingeka ukususa imbewu kanye nquma izithelo grinder inyama noma blender. Cherry sandile i isitsha koqweqwe lwawo uhlanganise noshukela ngesilinganiso 1.05 kg kilogram per
izithelo. IMisa ezidingekayo ubilise phansi kuze kuphekwe, ibangele njalo, ukuze
ugweme burning. Ekupheleni engeza iziphuzo zezithelo noma gooseberries ochotshoziwe ngesilinganiso 150 amagremu. amakhilogramu cherry ngalinye.
Cherry jam nge currant obomvu
Ukusetshenziswa kwemikhiqizo nobuchwepheshe kulungiselelwa le jam kuyafana futhi gooseberries. Jam ekupheleni ukupheka, udinga ukwengeza ochotshoziwe currant obomvu. Ngo currant kuyadingeka ukuze ususe wonke amagatsha futhi Isiqu, bese ugaye nganoma iyiphi indlela elula.
Ukuze ukulungiselela compote cherry kumele ihlelwa ngosayizi, ofakwe amanzi abandayo amahora amabili bese efakwa endaweni epholile. Ukuze silungiselele compote izithelo imibala ehlukene nezinhlobonhlobo ukuxubana is hhayi Kunconywa. izithelo lelungiselelwe uthele izimbiza kuhlanzekile futhi uthele isiraphu esishisayo 60%. Amabhange kufanele amboze zamabhodlela abilisiwe futhi inzalo 3 ilitha amathini imizuzu 45 ilitha - imizuzu 20.
Indlela amanzi okugqumisa izinhlanzi obomvu
Izigaba komqondo nezinga lokukhula kwengane leqembu: Indlela Yokwenza
C. Aitmatov, "Buran ayeke": isifinyezo